Umaka: ezine ezilinganayo | Martech Zone
Maka: inhlangothi ezine
NgeSonto, uDisemba 13, i-2020 Lwesine, Disemba 24, 2020 Douglas Karr
Ngenkathi amapulatifomu amaningi wezobuchwepheshe bokumaketha wokuqapha idumela nokuhlaziywa kwemizwa agxile kuphela kwimithombo yezokuxhumana, iBrandmentions ingumthombo ophelele wokuqapha noma yikuphi okushiwo ngumkhiqizo wakho ku-inthanethi. Noma iyiphi impahla yedijithali exhunywe kusayithi lakho noma okukhulunywe ngayo ngomkhiqizo wakho, umkhiqizo, i-hashtag, noma igama lesisebenzi… ihlolwe futhi ilandelwe. Futhi ipulatifomu yeBrandmentions inikeza izexwayiso, ukulandelela, nokuhlaziywa kwemizwa. AmaBrandmention enza ukuthi amabhizinisi akwazi: Ukwakha Ubudlelwano Obahilelekile - Thola nokuzibandakanya nabo
Kusetshenziswa Ukungena Komphakathi Ekuhlaziyweni Kokubika Kokubikezela
NgoMgqibelo, Ephreli 30, 2016 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 29, i-2016 Douglas Karr
Senze ukubonisana okuningi embonini yethu nezinkampani ezenze izindawo zokugcina ezinkulu zemininingwane ebaluleke kakhulu. Izikhathi eziningi, lezi zinkampani ziphonselwa inselelo yokwandisa umthelela wokumaketha kwazo, zikhulise isabelo sazo semakethe, futhi zikwenze ngokuya ngemikhiqizo yazo kanye nokunikezwa kwensizakalo. Lapho simba ngokujulile emapulatifomu abo, noma kunjalo, sithola ukuthi baqoqe izintaba zedatha ezingasetshenziswanga. Nazi ezinye izibonelo ngaphakathi kwe-imeyili Marketing